Nyi Nyi Latt: Google SketchUp Pro v7.1.6087
ဒါကတော့ Google ကနေ ထုတ်လုပ်တာပါ . လက်သမားများ အတွက် အတော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ် . 3D နဲ့ပါ လေ့လာလို့ ရအောင် လုပ်ပေးထား ပါတယ် . ခဲကတော့ ကိုယ့်ဟာကို အဆင်ပြေသလို ဆွဲပေါ့ . လက်သမား ၀ါသနာရှင်များ လေ့လာနိုင်ပါတယ် .